I-FAQs -I-Hebei Zifeng iTeknoloji eNtsha yaMandla Co, Ltd.
Lithini ixesha eliphakathi lokuhola?
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela okhetha ukufumana ngayo iimpahla. Ukucacisa yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa eneyona ndlela ibiza kakhulu. Ngokuya elwandle sesona sisombululo sisiso semali enkulu. Ngokuchanekileyo amaxabiso ezinto sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.